के हुन् सर्वश्रेष्ठ चकलेट स्टोर युरोप मा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > के हुन् सर्वश्रेष्ठ चकलेट स्टोर युरोप मा
युरोपेली महादेशमा व्यापक यसको अचम्मको र स्वादिष्ट चकलेट लागि प्रसिद्ध छ. वास्तबमा, तिनीहरूले यात्रा गर्दा केही अचम्मको स्वाद स्वाद मौका थियो कि यात्रा भन्नु आनन्द धेरै chocoholics. तपाईं युरोप र Adore चकलेट मार्फत आफ्नो बाटो बनाउने छ भने, हामी तपाईं को लागि ठूलो समाचार छ! एक ट्रेन सेव युरोपेली चकलेट दृश्य देख्यो र सँगै सूची राख्नु भएको छ 10 युरोप मा सबै भन्दा राम्रो चकलेट स्टोर. तपाईंले यी देशहरूको एक आफूलाई पाउन गर्नुपर्छ, र तपाईंले केही अचम्मको चकलेट लागि तरस प्राप्त, यी स्थानहरू मध्ये एक भ्रमण गर्न समय लाग्न. तपाईं निराश गरिनेछ.
1. सर्वश्रेष्ठ चकलेट स्टोर पेरिस – Debauve र Gallais
फ्रान्स सबैभन्दा उच्च मूल्याङ्कन यसको चकलेट लागि देशहरूमा बीचमा छ. तपाईं राजधानी गल्लीहरूमा मार्फत आफ्नो बाटो बनाउने बेला चकलेट स्टोर धेरै हेर्न पक्का. वास्तबमा, के तपाईं सामना चकलेट स्टोर को संख्या संग बढ्तै हुन सक्छ. पक्का सर्वश्रेष्ठ पेरिस प्रस्ताव छ अनुभव गर्न, हामी पेरिस मा अवश्य यात्रा चकलेट दोकान लागि वरिपरि आग्रह. यसलाई हुन छ जवाफ Debauve र Gallais. यो शानदार स्टोर छैन केवल शहर मा पुरानो छ, तर यो एक क्लासिक छ. यो 1800 को खोलिएको थियो र भएदेखि सार्वजनिक लागि स्वादिष्ट चकलेट सिर्जना गरेको छ. वास्तबमा, तिनीहरूले तिनीहरू फ्रान्सेली अदालतले र नेपोलियन लागि चकलेट आपूर्तिकर्ता भए खोलियो गर्दा त ठूलो थियो. धेरै ठूलो फ्रान्सेली नेताहरूले आफ्नो चकलेट आनन्द, र त तपाईं गर्न सक्छन्.
जब यो इटाली आउँछ, धेरै सन्दर्भमा Viziovirtù चकलेट प्रेमीहरूको लागि अवश्य यात्रा स्थान रूपमा. लोकप्रिय स्टोर भेनिस को केन्द्र मा स्थित र chocoholics सपना छ. को दोकान मा सबै उपलब्ध सर्वोत्तम सामाग्री संग हस्तनिर्मित छ. तिनीहरूले अविश्वसनीय स्वाद र सुखद भेनिस वातावरण को सिद्ध मिश्रण प्रस्ताव. वास्तबमा, चकलेट वरिपरि आफ्नो दर्शन आकर्षक छ. तिनीहरूले हात द्वारा परम्परागत विधि र शिल्प सबै पालन. केवल सर्वोत्तम सामाग्री संग संयोजन, र तपाईं एक हुनुपर्छ यात्रा स्थान मा हृदय को भेनिस.
3. सर्वश्रेष्ठ चकलेट स्टोर मा एम्स्टर्डम – Vanroselen
नेदरल्यान्ड सामान्यतया जब तपाईं चकलेट विचार मनमा आउने पहिलो स्थानमा छ. तथापि, यो अझै पनि एक हो ठूलो ठाउँ संसारमा सबै भन्दा राम्रो चकलेट केही स्वाद. सबैभन्दा लोकप्रिय स्टोर को एक एम्स्टर्डम छ. Vanroselen संसार वर्ग चकलेट प्रयास गर्न खोजिरहेको कसैको लागि स्थान भ्रमण पर्छ छ. आफ्नो भण्डारमा सबै हस्तनिर्मित छ, combining chocolate with various fruits and herbs to create unique and mouth watering treats.
4. चकलेट हाउस Nathalie बन
तपाईं लक्समबर्ग मार्फत यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो शानदार चकलेट स्टोर एक विश्वव्यापी नाम छ कि द्वारा रोक्न निश्चित. तथापि, मूल छ चकलेट हाउस लक्समबर्ग को महान् Ducal महल विपरीत स्थित छ, र यो संसारमा सबै भन्दा राम्रो चकलेट सिर्जनाहरू केही घर छ. रोयल्टी अर्को स्थित, के तपाईं पक्का तिनीहरूले मात्र सर्वश्रेष्ठ प्रदान हुन सक्छ. आनन्द स्वर्गीय अनुभव केही संग सबै भन्दा राम्रो स्वाद मा विश्व.
5. सर्वश्रेष्ठ चकलेट स्टोर भियना मा – Xocolat निर्माण
के तपाईं कहिल्यै भियना मा Hietzing को धनी जिल्ला मार्फत टहलने लिन भने, एउटा यात्रा तिर्न Xocolat निर्माण. यो शानदार भण्डारमा, तपाईं युरोप मा सबै भन्दा राम्रो चकलेट केही पाउन सक्नुहुन्छ. सबै हेर्न को लागि ग्लास केसिङ मा प्रस्तुत, तपाईं देश मा चकलेट सबैभन्दा परिष्कृत प्रजातिहरू केही देख्न सक्नुहुन्छ. तपाईं चकलेट त्यहाँ रमाइलो गर्न वा कार्यशाला धाउन र चकलेट बनाउने कला बारे एक सानो सिक्न जान सक्नुहुन्छ.
तपाईं एउटा दोकान खोजिरहेको भने इतिहासको धनी र स्वाद, त्यसपछि कुनै थप भन्दा हेर्न Erich Hamann मा पश्चिम बर्लिन. दुई कुराहरू यो स्टोर आउट खडा बनाउन. पहिले, यो पसलमा नै अद्भुत इतिहास छ. यसलाई फिर्ता तिथिहरु 1928, र यो दोस्रो विश्व युद्ध बाँचे एक Bauhaus शैली भवन मा स्थित छ. दोश्रो, यो परम्परा र ठूलो स्वाद को आफ्नो सम्मान. तिनीहरू अझै पनि गाढा चकलेट मा खोल्ने र प्रेम स्टोर ध्यान देखि मूल नुस्खा छ. तथापि, तिनीहरूले पनि सेतो चकलेट र अन्य विभिन्न स्वाद प्रस्ताव. आफ्नो चकलेट छाल शहर को कुरा छ, त्यसैले सुनिश्चित गर्न प्रयास भने तपाईं यो भ्रमण स्टोर.
7. सर्वश्रेष्ठ चकलेट स्टोर ब्रुग्स मा – चकलेट रेखा
यो चकलेट सिर्जना कला आउँदा बेल्जियम सबै भन्दा राम्रो बीच छ. बेल्जियम सहर मार्फत हिड्ने, तपाईं प्रदर्शनमा स्वादिष्ट morsels धेरै देख्ने. सबै भन्दा राम्रो ठाउँमा एक शानदार चकलेट छ प्राप्त गर्न चकलेट रेखा ब्रुग्स मा. पसलमा चकलेट को एक राम्रो टुक्रा उठाउँछ कि कुनै लागि अवश्य यात्रा हो. त्यहाँबाट चयन गर्न परम्परागत स्वाद धेरै र धेरै मजा र प्रयोगात्मक चकलेट छन्. के रेखा बाहिर खडा भएको चकलेट बनाउँछ चकलेट बनाउने आफ्नो प्रक्रिया छ. तिनीहरूले देखि सेम चकलेट सीधा बनाउन र पीस र चकलेट मिश्रण लागि उपकरण विशेष छ. तपाईं ब्रुग्स छन् अर्को समय, चकलेट रेखा मा अचम्मको स्वाद र उत्कृष्ट अनुभव रमाइलो गर्न समय लाग्न.
8. अधिकतम Chocolatier
स्विट्जरल्याण्ड यसको चकलेट लागि प्रसिद्ध छ. वास्तबमा, हामी स्विस गर्न दूध चकलेट विशेषता सक्नुहुन्छ. तपाईंले देश प्राप्त, चकलेट जताततै छ भन्ने नोटिस गर्नेछन्. लगभग तपाईं जानुहोस् हरेक ठाउँमा खान एक खानको भेटी चकलेट स्टोर भरिएको छ. तपाईं अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने सबै भन्दा राम्रो स्विट्जरल्याण्ड प्रस्ताव छ, धेरै भन्ने कुरामा सहमत अधिकतम Chocolatier हो भ्रमण गर्न सिद्ध स्थान. यो एक स्थानीय मनपर्ने छ, र एक राम्रो कारण लागि. तिनीहरूले शीर्ष गुणवत्ता सामाग्री प्रयोग र स्विट्जरल्याण्ड मा सबै भन्दा राम्रो चकलेट केही उत्पादन. तिनीहरूले पनि एक अद्वितीय छ, चार मौसम मेनु मौसमी चकलेट स्वाद बनाउँछ कि. निश्कर्षमा, तपाईं स्वाद को एक किसिम को अनुभव गर्न सक्छन्, मा निर्भर जब तपाईं भ्रमण स्टोर.
ज्यूरिख ल्यूसर्न गाडिहरु गर्न
ल्यूसर्न गाडिहरु गर्न बर्न
जेनेभा ल्यूसर्न गाडिहरु गर्न
Konstanz ल्यूसर्न गाडिहरु गर्न
9. सर्वश्रेष्ठ चकलेट स्टोर बुडापेस्ट – चकलेट Rozsavolgyi
हंगेरी chocoholics लागि लुकेका मणि छ. तिनीहरूले अचम्मको मिठाईहरू विभिन्न बनाउन, र आफ्नो चकलेट असाधारण छन्. एक अचम्मको चकलेट छ आनंद भ्रमण पर्छ चकलेट Rozsavolgyi बुडापेस्ट. यो मीठो व्यवहार धेरै प्रदान गर्दछ र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अचम्मको चकलेट सिर्जनाहरू. आफ्नो चकलेट आफ्नो चकलेट bonbons संग अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त, र जब तपाईं उनलाई प्रयास, यो किन स्पष्ट छ. धनी, aesthetically खुसी morsels स्वर्गीय छन्. यदि तपाईं द्वारा रोक्न यात्रा बुडापेस्ट.
हाम्रो सूची अन्तिम 10 सर्वश्रेष्ठ चकलेट स्टोर मा युरोप Sprungli. तपाईं स्विस चकलेट को शास्त्रीय विचार embodies एक स्थानको लागि देख रहे भने, कुनै थप भन्दा हेर्न Sprungli ज्यूरिखको. को दोकान खुलेको थियो 1859 र अचम्मको बनाएको छ, भएदेखि handcrafted चकलेट सिर्जनाहरू. तपाईं अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने ठूलो चकलेट सामाग्री को उत्कृष्ट देखि उत्पादन, यात्रा Sprungli.
निश्कर्षमा, युरोप भन्दा राम्रो चकलेट लागि देख छ जो कसैले र सबै भन्दा राम्रो चकलेट स्टोर वा एक Choco प्रशंसक लागि रोमाञ्चक ठाउँ छ.
तपाईं युरोप मार्फत आफ्नो अर्को यात्रा अवधिमा chocoholics स्वर्ग अनुभव गर्न तयार छन्? पुस्तक एक ट्रेन टिकट आफ्नो इच्छा गन्तव्य र स्वाद सबै तिनीहरूले प्रदान गर्न.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 सर्वश्रेष्ठ चकलेट स्टोर युरोप मा” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-chocolate-stores-europe/- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#candyshop #पसलहरूमा चकलेट europetravel खन्चुवा